Kpughere nkọwa niile nke Nubia Z20 ma kwenye na ihuenyo ya abụọ | Gam akporosis
E gosipụtara nkọwa niile nke Nubia Z20 na enyo ya abụọ gosipụtara
N’oge na-adịghị anya, anyị ga-enweta ama ọhụụ ọhụụ ọhụụ sitere na enyemaka nke ZTE, nke bụ Nubia. Ngwaọrụ, nke ga-abịa dị ka Nubia Z20, ọ ga-arụ ihu abụọ, dị ka ekwuru. Ekwenyela na nke a na ohere ọhụrụ a site n'aka TENAA, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịgba akwụkwọ nke China.
Na mgbakwunye na ịkọwapụta na ekwentị ahụ ga-etinye ihu abụọ - nke bụ isi na nke pere mpe na azụ azụ-, ahụ na-achịkwa ahụ depụtakwara njirimara na nkọwapụta ọrụaka nke Z20, na anyị kọwara ha n'okpuru.
Dika ihe nchekwa data TENAA dere, Nubia Z20 - nke edeputara dika "Nubia NX627J" n'elu ikpo okwu - biara na 6.42-inch OLED isi ngosi, nke nwere mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,340 x 1,080 na akụkụ 19: 5: 9. Ihuenyo nke abụọ, nke dị n'azụ, dị obere, olee otu o gha adi na uzọ ozo; Ihe ndị a dị sentimita 5.1, bụkwa OLED ma na-etu ọnụ otu mkpebi panel. N'aka nke ya, n'ihi nha nke akụkụ anọ ndị a na bekee ha, ekwentị ahụ ruru 158.63 x 75.23 x 9.2 mm. N'aka nke ọzọ, ọ dị kilogram 186.
Akwụkwọ Nubia X
Ọhụrụ Snapdragon 855 Plus si Qualcomm yiri ka ọ dị n'okpuru mkpuchi nke ekwentị, Ebe ọ bụ na cores asatọ na oge elekere nke 2.96 GHz pụtara na ndepụta nke otu. Iji jikọta SoC a, 6 + 128 GB, 8/256 GB na 12/512 GB Ram na ROM bụ ndị akwadoro. Batrị na-ahụ maka nnwere onwe nke ngwaọrụ a bụ 3,900 mAh; onye a nwere nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa.
Nubia Z20 nwere igwefoto azụ atọ. Isi ihe mmetụta nke usoro ihe osise a bụ 48 MP, ebe nke abụọ bụ 16 MP. Mkpebi nke mkpalite nke atọ amabeghị, mana ọ nwere ike ịbụ 8 MP. Android achịcha bụ os ga-agba ọsọ na ama.
El Na-esote August 8 ga-launching. N'ụbọchị ahụ, anyị ga-amatakwu banyere ya. Ka anyị na-eche, ị ga - ahụ foto ị sere n’ehihie n’ehihie na Chile izu ole na ole gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » E gosipụtara nkọwa niile nke Nubia Z20 na enyo ya abụọ gosipụtara
Helio G90: MediaTek's processor processor bụ ọrụ
Google ga - eji Google Assistant mee ihe karịa Voice Search